Karipetra fanapahana, tsihy ary rug miaraka amin'ny fanapahana laser - Goldenlaser
Karipetra fanapahana, tsihy ary rug miaraka amin'ny fanapahana laser
Karipetra fanapahana laser, tsihy ary rug
Fanapahana karipetra mazava tsara amin'ny fanapahana laser
Ny fanapahana karipetra indostrialy sy karipetra ara-barotra dia fampiharana lehibe hafa amin'ny laser laser CO2.
Amin'ny tranga maro, ny karipetra synthetic dia tapaka amin'ny kely na tsy misy charring, ary ny hafanana vokarin'ny laser dia miasa mba hamehezana ny sisiny mba hisorohana ny fikororohana.
Maro ny fametrahana karipetra manam-pahaizana manokana amin'ny mpanazatra môtô, fiaramanidina, ary fampiharana kely hafa momba ny tapakila kely no mahazo tombony amin'ny fahamendrehana sy ny fanamorana ny fananana ny karipetra amin'ny rafitra fanapahana laser amin'ny faritra midadasika.
Amin'ny fampiasana rakitra CAD amin'ny planina gorodona, ny fanapahana laser dia afaka manaraka ny drafitry ny rindrina, ny fitaovana ary ny fitoeram-birao - eny fa na dia ny fanaovana sary nohetezana ho an'ny tsatokazo fanohanana latabatra sy ny lalantsara amin'ny fametrahana seza aza.
Ity sary ity dia mampiseho ampahan'ny karipetra misy sary nohetezana sary miendri-pantsika izay afovoany eo afovoany. Ny kofehin'ny karipetra dia mifangaro amin'ny alàlan'ny fanapahana laser, izay misoroka ny fikororohana - olana iraisana rehefa tapaka ny karipetra.
Ity sary ity dia maneho ny sisin'ny voadidy nanadio. Ny fifangaroan'ny kofehin'ity karipetra ity dia tsy mampiseho famantarana mitsonika na mandoro.
Fitaovana karipetra mety amin'ny fanapahana laser:
Karipetra amin'ny gorodona, karipetra logo, doormat, fampidirana karipetra, karipetra amin'ny rindrina amin'ny rindrina, farafara yoga, tsihy fiara, karipetra fiaramanidina, tsihy an-dranomasina, sns.
Torolàlana momba ny milina laser
Laser laser cutter ho an'ny fitaovana lehibe endrika
AZA ATOA AZA ATAO AN-TANANA NY FARITRA miasa
Sakany: 1600mm ~ 3200mm (63in ~ 126in)
Halavany: 1300mm ~ 13000mm (51in ~ 511in)
Jereo ny milina fanapahana laser ho an'ny karipetra amin'ny hetsika!